नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पिपलारुखे ठुल्दाई, हाम्रा गाउँको हैजा, लुतो र अहिलेको कोरोना महामारी !
पिपलारुखे ठुल्दाई, हाम्रा गाउँको हैजा, लुतो र अहिलेको कोरोना महामारी !
हाम्रो नेपाली नयाँ वर्ष २०७७ सुरु हुँदै गर्दा र आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन केही लेख्नै पर्छ भनेर कम्प्युटरमा बस्दै गर्दा कोरोनाले त्रसित आतङ्कित मन भित्र अनेकौँ विषयहरू बुरुक्क बुरुक्क उफ्री रहेका छन् ।
मेरा सबै सबै मित्रहरू, आफन्तजन, शुभेच्छुक, दर्शक, श्रोता र पाठकहरूमा सबैभन्दा पहिला नयाँ वर्ष २०७७ को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र कोरोना भाइरस महामारीबाट सकेसम्म सुरक्षित रहन हर सम्भव उपायहरू अपनाउन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । पहिला निकै डराएको म अहिले डराउन छाडिसकेको पनि अवगत गराउन चाहन्छु ।
किन डराउन छाडिस् भन्नुहोला - उत्तर सरल छ । म गुल्मीको गाउँमा गाई गोठमा जन्मिएको मान्छे । हैजा महामारी देखी धेरै प्रकारका उतार चढाव भोगेको अनुभव छ । उकालो ओरालो गर्ने देखी घाँस दाउरा, पानी पँधेरा, हलो कोदालो, दुःख सुख सबै देखेका भोगेका, माटोमै जन्मिएका, माटोमै खेलेका, हुर्के बढेका, धुँवा धुलो सब पचाएका हामीलाई कोरोनाले सजिलै छुन्छ जस्तो मलाई लागेन । छोयो नै भने पनि हामीलाई त्यति सजिलै मार्न सक्छ भन्ने कुरा म पत्याइन ।
सम्झिनुस् त हामीले खाने पँधेराको पानीको क्वालिटी कस्तो थियो ? हामीले खाने खानाका कुनै पनि परिकारको क्वालिटी अर्थात् गुणस्तर, सरसफाइ कस्तो थियो ? झाडा बान्ता देखी कस्ता कस्ता महामारी आए गए, मरियो त ??
हाम्रो गाउँमा एक जना अलि झडङ्याहा टाइपको दाइ हुनुहुन्छ पिपलारुखे ठुला । नाम पनि सिंह बहादुर कुँवर । इन्डियन आर्मीमा पेन्सन पकाएर अहिले घरमै बसेका ठुल्दाई पहिला लाहुरबाट घर आउँदा मिठाई खान पाइन्छ भनेर हामी लाइन लाग्थ्यौँ वहाँको घरमा । दसैँमा पनि टिको लगाउन घरको टिको पछि दौडिएर हामी ठुलदाइको घर जान्थ्यौँ किनकि ठुलदाइले एकको नयाँ नोठ दिन्थे बुढाले टिको लगाइदिए पछि त्यो बेला पनि ।
ती ठुलदाइको हातको पिटाइ नखाएका र देखे नतर्सिने गाउँ भेगमै कम थिए मान्छे । बुढाले मुख भन्दा पहिला हात चलाउने बानी थियो । ठुलदाइकी छोरी लक्षीमा र म सँगैका सहपाठी पनि । एक दिन मेरै आँखा अगाडि ठुलदाइले माइली छोरी कमलालाई टिपेर छेलो फाले जस्तै पोखरीमा फालेको त्यो दिन देखी म ठुल्दाईको नजिक पर्न डराउँथेँ ।
म कहिल्यै त्यस्तो बिठ्याइँ नगर्ने मान्छे, एक दिन सानैमा ठुल्दाईको कुकुरको छाउरो पछाडि पछाडि आयो । डराएर कुकुर भगाउन सानो ढुङ्गो कुकुर तिर फालेको के थिएँ बुढाले देखेछन् । अनि त बुढाले मेरो ढाड र करङको मर्मत राम्रै सँग गरे नि । त्यति मात्र हो र मूल बाटोमा कुकुरका शान्ति ठुलदाइले मलाई गोहोरो लतारेझैँ लतारेको त्यो दिन हिजो जस्तो लाग्छ ।
यिनै ठुल्दाई हाम्रो गाउँमा कोही बिरामी भए "सुई लाउने डाक्टर" पनि थिए उ बेला । मेरो घर पल्तिर धर्मराज दाइको घर थियो । दाइ बिरामी पर्नुभयो । ७ वटा सुई लाउनुपर्ने स्वास्थ्य चौकीले बताए पछि धर्मराज दाइले नजिक हुन्छ त्यहीँ पिपलारुखे ठुलाकोमा गएर लगाउँला भनेर खोपको औषधी लिएर आउनुभयो । सुई लाउन धर्मराज दाइले मलाई साथी लिएर जानुहुन्थ्यो । त्यो बेला मैले देखेको ती ठुलदाइले एउटै सुइले वर्षौँ वर्ष सुई लगाएर ( सुई लगाउने भनेको खोप लगाउने भनेको के कस्तो अलमलिएको ??) गाउँले लाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो । खइ लागेको त्यो सुई पचाएका हामी ती गाउँ बाट उठेर आएकालाई कोरोनाले सजिलै छोला र !
पिपलारुखे ठुल्दाई अहिले पनि टाठै हुनुदोरहेछ मैले पोहोर साल गाउँ जाँदा भेटेर आएँ । ठुल्दाई अहिले सुई लाउनुहुन्छ कि छोड्नु भयो ? भन्दा बुढा भन्दै थिए - भाइ, त्यो बेला पो स्वास्थ्य चौकी डाक्टर, अहेब, अनमी हुन्नथेर सबै चलाइन्थ्यो अहिले त गाउँ गाउँ मा छन् क्या रे ! सुई लगाउन छाडेँ । मैले यो ठुल्दाईको प्रसङ्ग यहाँ किन ल्याएँ बुझ्नु भयो होला - त्यसरी एउटै सुई वर्षौँ प्रयोग गर्दा पचाएका हामी, ठुल्दाइहरुलाई डाक्टर बनाएका हामी के सजिलै मरौँला र ??
कयौँ हैजा र महामारी भोगेर यहाँ सम्म आएका हामीलाई अर्को गजबको खुसी लाग्ने कुरो छ भने नेपालमा लगभग हामी सबैले बिसीजी खोप लिएका छौँ । बिसीजी को खोप लगाएका मानिसहरूमा कोरोना सङ्क्रमण कम देखिएको र देखिए पनि मृत्यु दर अत्यन्त न्यून रहेको अमेरिकामा गरिएको एउटा सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
एउटा अर्को रोचक घटना सुनाउँ । म ७ वर्षको हुँदा हाम्रो गाउँ वरपर हैजाको महामारी फैलियो । केहीको मृत्यु भयो । अनि अर्को वर्ष लुतोको महामारी भयो । म सानै थिएँ र पनि सम्झिन्छु । गाउँ भर जो भेटिन्थे कनाउँदै गरेका भेटिन्थे । शिर देखी पाउ सम्म मेरो शरीर भर हरेक अङ्ग अङ्गमा लुतो भएर कनाउँदा शरीर पुरै रगताम्मे हुन्थ्यो । भन्दा लुतो सामान्य लाग्छ तर भएकालाई र यो भोगेका लाई सोध्नुस् यहाँ भन्दा खतरा र सङ्क्रमण हुने अरू के हुन्छ होला र !
लुतो आए पछि कनाउँदा कनाउँदै घाउ हुने मात्र होइन जब चिलाए पछि यसरी चिलाउँछ कि सहन नसकेर मान्छेले छालै लोकत्याएर फाल्छन । लुतो भयो भने बाँदर कहिल्यै निको हुन्न, कनाउँदा कनाउँदै मर्छ सुन्नु भएकै होला । मैले पनि वाक्क दिक्क भएर छाला लोकत्याएको याद छ त्यो बेला ।
हाम्रो गुल्मीको धरम्पानी मैनडाँडा भन्दा तल मनभाग ( पौवा ) भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ एक जना रेणु भन्ने सिएमए क्लिनिक चलाएर बस्थे । उनलाई नै हामी डाक्टर भन्थ्यौँ । मलाई लुतो भएका बेला उनले भने - हेर बाबु एक महिना हरेक दिन सुई लाउनुपर्छ । उनी मेरो दाइका साथी पनि थिए । त्यसैले मलाई उनले बढी टेक केयर पनि गरे । एक महिना सम्म हरेक दिन सुई लगाएको म त्यो पिडा अहिले शब्दमा व्यक्त गर्न पनि सक्दिन ।
एउटै सुइले त्यो बेला सबैलाई सुई लाउने चलन थियो । त्यति गर्दा नमरेर बाँचेको मान्छे अहिले कसरी मर्छु हँ ? कोरोना भाइरस आयो भने पनि त्यो म सँग जुध्नै सक्दैन, आफै निसास्सिएर मर्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु तर सावधान भने छु है । सुरक्षित हुने उपाय, सम्बन्धित निकायका सूचना र निर्देशन पुरा पालन गर्छु ।
- बैशाख १, २०७७, भर्जिनिया अमेरिका
हाँस्य कविता :
लोक तथा दोहोरी गायक रामप्रसाद खनालका लोकप्रिय २७ वटा गीतहरु आज देखि You tube को Audio jukebox मा
दर्शक, श्रोताहरुको रोजाईमा परेका, लोक तथा दोहोरी गायक रामप्रसाद खनालका लोकप्रिय २७ वटा गीतहरु आज देखि You tube को Audio jukebox मा ७ घण्टा ५७ मिनेट सम्म लगातार वा बिच बिचमा गएर आफ्नो इच्छा अनुसार सुन्न मिल्ने गरी उपलब्ध गराईएको छ । " सबै दर्शक, श्रोता एबम सुभेच्छुकहरुमा नयाँ बर्ष २०७७ को शुभकामना सहित यो कोशेली पस्केको छु । कृपया सुनिदिनुहोला । मन परे शेयर पनि गरिदिनुहोला । तपाईं हामी सबैको जय होस ।" रामप्रसाद खनालले आफ्ना दर्शक, श्रोताहरुसँग भएका छन । you tube मा https://www.youtube.com/watch?v=doexVWAeNlg&t=176s मा गएर वा Ram Prasad Khanal | 27 Audio Songs | Jukebox Part -1 | 2020/2077 टाइप गरेर यो गीत भेट्न र सुन्न सकिन्छ ।
* लोक तथा दोहोरी गायक रामप्रसाद खनालका गीतहरु ( अडियो जुकबक्स भाग - १ )